ACCA – Win Bo Myint Accountancy Training Centre
ACCA (Association of charted certified account)
ACCA ဆိုတာ နိုင်ငံတကာအဆင့် စာရင်းကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ACCA ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ကမ္ဘာ့နေရာတော်တော်များများမှာ စာရင်းကိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေကို အလွယ်တကူ လုပ်ကိုင်နိုင်တာကြောင့် ACCA ကို လေ့လာကြသူများသည် နိုင်ငံပေါင်း ( 170 ) ကျော်မှာ ရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ACCA မှာ Part 1, Part 2, Part3ဆိုပြီး အပိုင်း ၃ ပိုင်းပါရှိပါတယ်…ဒီအပိုင်း ၃ ပိုင်းမှာ စုစုပေါင်း ၁၅ ဘာသာ ပါရှိပြီး ၁၃ ဘာသာဖြေဆို၍ ACCA member အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်…….ဒီလစာနှုန်းထားတွေသည် ခန့်မှန်းခြေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ကျွမ်းကျင်မှု့ အစရှိသည်တို့ အပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားနိုင်ပါတယ်……..
ACCA သည် Financial accountant ရဲ့ အမြင့်ဆုံး Role တစ်ခုဖြစ်သော CFO အဖြစ်သာမက Management accountant ရဲ့ အမြင့်ဆုံး Role တစ်ခုဖြစ်သော CEO အနေဖြင့်ပါ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ACCA Part 1 ပြီးလျှင် လစာအနေနှင့် ၃ သိန်းမှ ၄ သိန်းဝန်းကျင် ရရှိနိုင်ပြီး Part2ပြီးသော ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၆ သိန်းမှ ၈ သိန်း ဝန်းကျင် ရရှိနိုင်ပါသည်…..ACCA completion ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ Finance ရဲ့ အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်တဲ့ CFO အနေဖြင့် လစာ သိန်း ၂၀ မှ ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင် ရရှိနိုင်ပါတယ်……..
Part 1 (Applied Knowledge)
Part 1 မှာ ဖြေဆိုရမဲ့ ဘာသာရပ်တွေကတော့ စာရင်းကိုင်ပညာရဲ့ အခြေခံ ဘာသာရပ် ၃ ခု ဖြစ်ပါတယ်…..
ဒီဘာသာရပ် ၃ ခုကို အောင်မြင်ရင်တော့ ACCA က ချီးမြှင့်တဲ့ Diploma in accounting and business ကို ရရှိပါတယ်…..
Tution fee – 500,000 ကျပ်ဝန်းကျင် (၃ ဘာသာ)
Register fee – 80,000 ကျပ်ဝန်းကျင်
Exam fee – $ 290 ဝန်းကျင် (၃ ဘာသာ)
Annual fee – 250,000 ကျပ်ဝန်းကျင်
စုစုပေါင်း မြန်မာကျပ်ငွေ အနေဖြင့် Part 1 ၃ ဘာသာကို ၁၄ သိန်းဝန်းကျင် ကုန်ကျပါမည်။ သို့သော် တစ်ခါတည်း ကုန်ကျရမှာ မဟုတ်ပါ။
Part2(Applied Skills)
Corporate and Business Law Performance Management Taxation Financial Reporting Audit and Assurance Financial Management Part2ပြီးဆုံးအောင် ဖြေဆိုမည်ဆိုပါက စုစုပေါင်း Tution fee, Exam fee အပါအဝင် ၂၅သိန်း ဝန်းကျင်ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ၂၅ သိန်းမှာလည်း တစ်ခါတည်း ပေးသွင်းစရာ မလိုဘဲ မိမိဖြေဆိုမည့် အချိန်နှင့် ချိန်ဆသွင်းရပါမည်။
Part3(Strategic Professional)
Part3Level မှာတော့ စုစုပေါင်း ၆ ဘာသာ ရှိပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၄ ဘာသာ ဖြေဆိုရမှာပါ။ ဘာသာရပ်တွေကတော့ Strategic business leader Strategic business reporting ဒီဘာသာ ၂ ခုကတော့ မဖြစ်မနေ ဖြေဆိုရမှာပါ။ Advanced Financial Management Advanced Performance Management Advanced Taxation Advanced Audit and assurance ၄ ဘာသာမှာတော့ မိမိနှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ် ၂ ခုကို ရွေးချယ်ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်…..ဒီအဆင့်မှာလဲ စီးပွါးရေးနှင့် ပက်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ဦးစားပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်..ဒါ့ကြောင့်လဲ ACCA ဟာ CFO, CEO တွေအထိ တက်သွားလို့ ရတယ်လို့ လက်မထောင်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Part3ဖြေဆိုမည် ဆိုမည်လျှင်လည်း ၂၅ သိန်းဝန်းကျင် ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
သင်ကြားချိန်ကာလ ကတော့ Full time အချိန်ပေးပြီးကြိုးကြိုးစားစား လုပ်မည်ဆိုလျှင် ၁၃ ဘာသာကို ၃ နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်း ပြီးအောင်ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်……..ACCA စာမေးပွဲအားလုံး ဖြေပြီးသွားရင်တော့ Strategic Financial project နှင့် Global issue for the Finance Professional Module တွေ ထပ်လုပ်ပြီး University of London ကပေးအပ်တဲ့ M.Sc in Professional Accounting ဘွဲ့ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမသွားဘဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ CPA (Certified Public Accountant) ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ACCA ၁၄ ဘာသာအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် Law, Tax, Auditing ၃ ဘာသာ ထပ်ဖြေရင် ရပါပြီ….
ကြီးမားတဲ့ မည်သည့် ပညာရပ်ကိုမဆို လွယ်လင့်တကူ မရနိုင်ပါ။ အောင်မြင်မှု့ ကြီးမားလေလေ ပေးဆပ်ရတဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားလေလေပါပဲ….
ACCA Website Link